Megangelyo waxaad ka codsan kartaa oo kaliya Finland- kama soo codsan kartid dibadda - Asylum in Finland
Haddii aad dooneyso in aad Finland ka codsato megangelyo, waa in aad u soo safartaa Finland. Suurtagal ma ahan in dibadda laga soo codsado megangelyo.
Marka aad timaado Finland, sida ugu dhaqsaha badan u ogeysii in aad codsaneyso megangelyo saraakiisha ilaalada xuduudaha ama booliska. Sarkaalka kaa qaabila codsigaada megangelyada ayaa diiwaangelinaya macluumaadkaada aasaasiga ah islamarkaasna kaa qaadaya faraha isagoo sidoo kale sameynaya hubinta diiwaanka ee loo baahan yahay. Taas kaddib codsigaadu wuxuu u wareegayaa feylka ka baaraandegista ee Hay’adda socdaalka. Mudada ka baaraandegista waxaad u guureysaa xarunta qaabilaadda.
Billowga hore Hay’adda socdaalku waxey baareysaa in codsigaada looga baaraandegi karo Finland. Finland ma baareyso sababaha codsigaada megangelyada haddii aad ogolaansho degitaan ku leedahay dalka kale oo nabad ah ama wadan kale uu si waafaqsan nidaamka Dublin uga mas’uul yahay ka baaraandegista codsigaada.
Haddii sababaha megangelyadaada lagu baarayo Finland, Hay’adda socdaalka ayaa kuugu yeereysa wareysiga megangelyada. Waa in aad wareysiga megangelyada sida ugu fiican ugu sheegtaa sababaha aad ku codsaneyso megangelyada. Waxaa wanaagsan in aad wadato dhammaan caddeymaha la heli karo oo aad ku caddeyneyso in aad run ku hadleyo. Saraakiisha ayaa baaraya in aad heysato sababaha lagu helo megangelyada.
Haddii aad hesho go’aan ogolaansho ah, si iskaa ah ama caawimaadda xarunta qaabilaadda ayaad ku heli kartaa guri. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa boos degmo degmada qawl-qaaday in ay qaabileyso dadka hela ogolaansha degitaanka. Boos degmo waxaa loola jeedaa, in degmada ogolaato in ay kuu qabanqaabiso waxyaabaha ay kamidka yihiin guri kiro ah, adeegyada la-qabsashada, adeegyada turjumaadda iyo carruurtaada oo loo qabanqaabiyo waxbarasho iskuul oo waafaqsan da’dooda, aqoontooda iyo xirfaddooda.
Haddii aad hesho go’aan diidmo ah ama aad codsigaada ka noqoto kahor inta uusan go’aanku diyaar noqon, waxaad codsan kartaa barnaamijka dib u noqoshada aan qasabka aheyn. Dib u noqoshada aan qasabka aheyn waxaad kaalmo ugu heli kartaa ku noqoshada wadankaada.
Sii aqri: Macluumaad loogu talagalay megangelyo-doonka (PDF)
codsiga megangelyda nidaambka Dublin